Ifulethi e-Multiparque do Sudoeste - I-Airbnb
Ifulethi e-Multiparque do Sudoeste
Brasília, Distrito Federal, i-Brazil
I-ifulethi elisevisiwe ephelele ibungazwe ngu-Graicy
U-90% wezivakashi zakamuva unikeze u-Graicy izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
I-Multiparque Hplus Long Stay ihhotela lokuhlala elihlinzeka ngendawo yokuhlala ehlukene kwenye yezifunda eziphakeme kakhulu zenhloko-dolobha yombuso, i-Setor Sudoeste, eseduze kakhulu ne-Esplanada dos Ministérios, enohwebo oluthuthuke kahle.
Ifulethi elingu-30m² eline-microwave, isitofu sikagesi, ifriji noma isiqandisi, izinto zasekhishini, i-air conditioning ehlukanisiwe, i-LCD TV ene-cable TV, umbhede ophindwe kabili, umbhede wosofa, itafula lomsebenzi, umbhede nelineni lokugeza.
Ukuze ubhukhe amafulethi angaphezu kwelilodwa, xhumana nathi.
I-Multipark inikeza isevisi yowesifazane kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu (ngaphandle kwamaholide), i-cable TV, i-inthanethi negalaji. Amanzi, ugesi, imali ye-condo, ne-IPwagen kufakiwe kuzo zonke izinkontileka zenyanga.
* Ifulethi lilethwa lihlanzekile esivakashini futhi linombhede ogcwele nelineni yokugeza. Ukubhukha okungaphezu kobusuku obungu-7 kuhlanganisa ukuhlanza kabili ngeviki kanye noshintsho lwe-sousseau kanye ngeviki kusuka ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu (ngaphandle kwamaholide). Ekubhukheni kobusuku obungaphansi kuka-7, izinguquko zokuhlanza nezelineni zizokhokhiswa ngokuhlukile, uma kuceliwe yisivakashi. Izicelo neminye imininingwane kufanele isingathwe ngokuqondile endaweni yokwamukelwa kwe-Multipark.
I-Multiparque inokufinyelela kalula ku-Monumental Axis.
Sou Graicy da Hplus Hotelaria, precisa de um quarto para uma estada no Distrito Federal?
Ithimba le-Hplus liyathanda ukwamukela futhi lisesandleni sakho kunoma yisiphi isidingo.